တကယျ့ အကွောငျးပွခကျြ - Owl Myanmar News
“သီတာရေ… သီတာ…” “ရှငျ… ကို… လာပွီ…” “ဝှူး… မောလိုကျတာကှာ…” “ရော့… ကို… ရအေေးအေးလေး သောကျလိုကျ…” “လိမ်မာလိုကျတဲ့ မိနျးမ…” နောငျရဲသညျ သီတာ လှမျးပေးသော ရခှေကျထဲမှ ရကေို လှမျးယူလိုကျပွီး ဧညျ့ခနျးထဲမှ ဆိုဖာခုံတှငျ ထိုငျကာ ရကေို မော့ခလြိုကျသညျ။ သီတာကတော့ နောငျရဲ ကမျးပေးသညျ့ အိတျတှကေို လှမျးယူပွီး အိပျခနျးထဲ ဝငျကာ စားပှဲခုံပျေါ သှားတငျထားသညျ။ အိပျခနျးထဲမှ ထှကျလာသော သီတာ့ကို လှမျးချေါလိုကျသညျ။
“သီတာရေ… လာပါဦး… ပွောစရာ ရှိလို့…” “အငျး… ပွောလေ… ကို…” “ကို… မနကျဖနျကရြငျ စင်ျကာပူကို အလုပျကိစ်စ သှားရမှာ… အဲ့ဒါ ၂ ရကျ တော့ ကွာမယျ… သီတာ တဈယောကျထဲ ဖွဈပါ့မလား…” “ဖွဈပါတယျ… ကိုရ…” “အိမျအကူ ကောငျမလေးတှကေို ရှာပွနျလှတျလိုကျတော့… သီတာ တဈယောကျထဲ ကနျြမှာ စိုးရိမျတယျ…” “မစိုးရိမျနဲ့… ဘာမှ မဖွဈဘူး… ကို သာ စိတျဖွောငျ့ဖွောငျ့နဲ့ အလုပျကိစ်စ လုပျစရာ ရှိတာ လုပျ… ပွီးတော့ ကောငျမလေးတှနေဲ့ ပြျောခငျြ ပြျောလာခဲ့… ခိခိ… ဂလေနျး သှားလိုကျဦးနျော…” “ဟာ… မသှားပါဘူး.. သီတာကလဲ…” “သှားပါ… ကိုရ… သီတာက အခု မပေါ့မပါးကွီးနဲ့… ကို့အလို ကို မဖွညျ့ပေးနိုငျဘူး… ကိုကလညျး သီတာ ဗိုကျရှိတယျဆိုပွီး လုပျမှ မလုပျတာ…” “ရပါတယျ… သီတာက ကို့ကို ပါးစပျနဲ့ လုပျပေးတာပဲကိုး…” “ခိခိ… အခုရော… လုပျပေးရမလား…”
“အငျး… အဲ့ဒါကွောငျ့ ခဈြတာ… နဦေး… ကို ရခြေိုး လိုကျဦးမယျ…” “ဒါဆို သီတာ ပါ လိုကျမယျလေ… တခါထဲ ဂြီးပါ တှနျးပေးမယျ…” “ဟားဟား… လာခဲ့…” ခဈြမိနျးမ သီတာ့ကို ဆှဲထူလိုကျကာ ပုခုံးမှ ဖကျပွီး ရခြေိုးခနျးသို့ ချေါသှားလိုကျသညျ။ သီတာက ပုလှေ မှုတျတာတော့ တကယျ့ရှယျပါ။ အဲ့… ပုလှေ တဈခုထဲ ကောငျးတာတော့ မဟုတျဘူး။ အကုနျ ကောငျးတယျ။ မွငျးစီးလညျး ကောငျးသလို၊ ဒေါ့ဂီပုံစံ ဆိုရငျလညျး စှငျ့နအေောငျ ကားထားတဲ့ တငျ က တကယျ့ရှယျကွီး။ ကိုယျဝနျ မရခငျတုနျးကတော့ ၂ ယောကျသား တကျညီလကျညီ တဖွောငျးဖွောငျး တဒိုငျးဒိုငျး တဒုနျးဒုနျး တပွှတျပွှတျ နဲ့ နရေ့ော ညရော ခဈြတငျးနှောကွသညျ။ အခုတော့ ကိုယျဝနျ ရှိလာတော့ သားဦးလေး ဆိုတော့လညျး ကိုယျဝနျ ထိမညျကို စိုးသဖွငျ့ သီတာက ခှငျ့ပွုသညျ့တိုငျ မလုပျဖွဈခဲ့။ သီတာ့ ပုလှနေဲ့ပဲ စခနျးသှားတာ မြားသညျ။ အခုလညျး ရခြေိုးခနျးထဲက ရခြေိုးဇလုံ (bathtub) ထဲမှာ ၂ ယောကျသား ဝငျစိမျပွီး ဆပျပွာတိုကျကာ အခငျြးခငျြး ဂြီးတှနျးနကေသြညျ။ နောငျရဲရဲ့ ညီတျောမောငျကတော့ ထောငျမတျလို့ပေါ့။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ အနအေထားမှ သီတာသညျ နောငျရဲကို ဂြီးတှနျးပေးရာမှ ညီတျောမောငျကို ကိုငျကာ ကှငျးတိုကျပေးတော့သညျ။ ရထေဲမှာ ဆပျပွာရညျတှနှေငျ့ ဆိုတော့ ခြောနတောပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ နောငျရဲကို ရခြေိုးဇလုံရဲ့ ဘောငျပျေါမှာ တကျထိုငျခိုငျးလိုကျပွီး ညီတျောမောငျမှာ ရှိတဲ့ ဆပျပွာမွှုပျတှကေို ရပေနျးနှငျ့ ဆေးခလြိုကျသညျ။ ပွီးတော့မှ ညီတျောမောငျ အရငျးကို လကျနှငျ့ကိုငျကာ ပါးစပျထဲကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ထညျ့ပွီး စုပျတော့သညျ။ တခါတလေ ညီတျောမောငျရဲ့ အကှဲကွောငျးလေးကို လြာဖြားနှငျ့ တို့ထိကာ ကစားနသေေးသညျ။ ညီတျောမောငျကို စုပျနရေငျးနှငျ့လညျး ဥ တှကေို အပွုံလိုကျ ကိုငျကာ ဖှဖှလေး လုံးခွလေိုကျ၊ ပါးစပျထဲ ထညျ့ပွီး စုပျလိုကျနှငျ့ ဆိုတော့ တျောတျောလေး ခံစားလို့ ကောငျးသညျ။
သီတာရဲ့ အပွုအစုအောကျမှာ ကဆြုံးခဲ့ရပေါငျး မနညျးသော နောငျရဲရဲ့ ညီတျောမောငျသညျလညျး အမှတျသညျးခွေ မရှိ ကဆြုံးပွနျသညျ။ ညီတျောမောငျမှ ထှကျလာသမြှ အရညျတှကေို တပွှတျပွှတျနှငျ့ စုပျရငျး မွိုခနြသေညျ့ သီတာကို ကွညျ့ကာ အခဈြစိတျတှလေညျး မြားသထကျ မြားလာသညျ။
ရခြေိုးခနျးထဲမှ ထှကျလာကာ အဝတျအစား ဝတျပွီးတော့ ညစာ အတူ စားကွသညျ။ နောငျရဲတို့ အိမျသညျ မကွီးလှနျး၊ မသေးလှနျး ၂ ထပျတိုကျ အိမျကလေး ဖွဈသညျ။ ၂ ယောကျလုံး အလုပျ အတူတူ လုပျသောကွောငျ့ အိမျအကူကောငျမလေး တဈယောကျ ချေါထားသျောလညျး အိမျအလုပျဆိုပွီး သိပျမလုပျရပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ အပိုငှေ မကုနျအောငျ မချေါပဲ ထားမလားဟု စဉျးစားမိသျောလညျး အခုတော့ သီတာ ဗိုကျကွီးနသေောကွောငျ့ ထိုကောငျမလေး ချေါထားတာ ခပျကောငျးကောငျး ဟုပငျ တှေးမိသညျ။
နောငျရဲရဲ့ ဖခငျဖွဈသူက လြှပျစဈပစ်စညျးဆိုငျရာ လုပျငနျးလေး ထူထောငျထားသောကွောငျ့ အခုလို နထေိုငျနိုငျခွငျး ဖွဈသညျ။ သီတာ ဆိုသညျမှာလညျး နောငျရဲ ရဲ့ ဖခငျ ဖွဈသူ ဦးအောငျ ရဲ့ အတှငျးရေးမှူး လုပျခဲ့သူ ဖွဈသညျ။ ငယျငယျရှယျရှယျနှငျ့ ထကျမွကျသူမို့ ဖခငျဖွဈသူက သီတာ တျောလှနျးကွောငျး မိသားစု ထမငျးဝိုငျးတှငျ တဖှဖှ ပွောသညျ။ အဲ့ဒီ အခြိနျမှာ နောငျရဲသညျ ဖခငျဖွဈသူရဲ့ သူငယျခငျြး ကုမ်ပဏီမှာ အလုပျသငျအဖွဈ ပညာသငျယူ အလုပျဝငျနခွေငျး ဖွဈသညျ။ သီတာ အလုပျဝငျပွီး ၅ နှဈလောကျ ကွာတော့ နောငျရဲ ရဲ့ မိခငျသညျ ရငျသားကငျဆာ ဖွငျ့ သဆေုံးခဲ့သညျ။
မိနျးမ သဆေုံးပွီးနောကျ ဦးအောငျသညျ အသကျ ၅၅ နှဈလောကျသာ ရှိသေးသျောလညျး နောကျ အိမျထောငျ မပွုတော့။ အိမျထောငျ မပွုသျောလညျး တခါတရံ အပြျောအပါးလေးတှတေော့ ရှိတတျသညျ။ သီတာ့ကိုတော့ ဦးအောငျသညျ မထိ။ နောငျရဲကိုလညျး မိမိ လုပျငနျးကို ဆကျလကျ ဦးဆောငျစကော သီတာနှငျ့ အလုပျ အတူ တှဲလုပျစခေဲ့သညျ။ အိုးခငျြးထား အိုးခငျြးထိ ဆိုသညျ့အတိုငျး လူငယျတှေ ဖွဈသညျ့ နောငျရဲ နှငျ့ သီတာတို့ ထိကွ ငွိကွသညျ။ နောငျရဲနှငျ့ သီတာကို လကျထပျပေးကာ မိမိတို့ လကျရှိ အိမျမှာပငျ နစေပွေီး ဦးအောငျကတော့ အိမျခှဲနလေိုကျသညျ။
လူငယျတှကေို လှတျလပျစခေငျြသလို၊ မိမိလညျး လှတျလှတျလပျလပျ နစေလေိုသောကွောငျ့ ဟူသော အကွောငျးပွခကျြဖွငျ့ပငျ ခှဲနခွေငျး ဖွဈသညျ။ တခါတလတေော့လညျး နောငျရဲတို့ အိမျကို အလုပျပိတျရကျတှဆေို လာကာ တဈည နှဈညလောကျ အိပျတတျသညျ။ အခုလညျး ဦးအောငျသညျ သူ့သူငယျခငျြးတှနှေငျ့ ခရီးထှကျနသေညျဟုသာ ပွောသှားသညျ။
မနကျ မိုးလငျးတော့ နောငျရဲသညျ ဇနီးဖွဈသူ သီတာ့ကို နှုတျဆကျကာ ထှကျခှာလာခဲ့သညျ။ သီတာလညျး အိမျတံခါး ပိတျပွီး အဝတျလြှျောစကျထဲ အဝတျတှေ ထညျ့ကာ လြှျောထားခဲ့ပွီး၊ မိမိတို့ အိပျခနျးကိုသာ ဖုနျစုပျစကျဖွငျ့ သနျ့ရှငျးရေး လုပျသညျ။ ကနျြ အခနျးတှကေိုတော့ အိမျအကူ ကောငျမလေး ပွနျလာမှ လုပျခိုငျးရမညျ။ သူကလညျး တဈပတျလောကျ ပွနျမညျဟု ပွောသဖွငျ့ ခှငျ့ပွုခဲ့သညျ။ သနျ့ရှငျးရေး လုပျပွီးတော့ မိမိ စားခငျြနသေညျ့ ရှောကျသီးသုပျ၊ ကွကျဥမှကွေျော၊ ပဲနီလေးဟငျးခြို နှငျ့ ငါးသလဲထိုးကွျော အပွငျ ခဉျြပေါငျကွျော (ဝကျသားသုံးထပျသားနှငျ့) တို့ကို ခကျြပွုတျတော့သညျ။
ခကျြပွုတျပွီးတာနှငျ့ ကိုယျလကျတှေ နညျးနညျး ထုံထိုငျးနတောနဲ့ နှိပျနကြေ ဖွဈသော အနှိပျသညျ ဒျေါစိနျအေးကို ဖုနျးလှမျးဆကျ ချေါလိုကျသညျ။ တျောသေးသညျ။ ဒျေါစိနျအေး အားတဲ့ အခြိနျနဲ့ တိုးလို့ နလေ့ညျ ၁ နာရီလောကျ လာမညျ ဟု ပွောသညျ။ သူကလညျး လကျမလညျဘူးလေ။ လကျ တျောတျော ထိသညျဟု ပွောရမညျ။ အနှိပျခံဘို့ ခြိနျးပွီးမှာတော့ လြှျောထားသော အဝတျတှကေို လှမျးကာ၊ ရခြေိုး ထားလိုကျသညျ။ ရခြေိုးခနျးထဲကနေ အထှကျမှာတော့ အဝတျအစား မဝတျခငျ ကိုယျလုံးပျေါ မှနျတှငျ မိမိကိုယျကို ပွနျကွညျ့နမေိသညျ။ ဗိုကျက တျောတျောကွီး ပူထှကျနပွေီ ဖွဈသညျ။ အပြိုဗိုကျဆိုတော့ ၄ လ လောကျ အထိက သိပျမပူပမေယျ့ အခု ၆ လ လောကျ ရောကျတော့ လုံးလုံးလေး ထှကျလာသညျ။
နို့ကွီးတှကေလညျး အရငျကထကျ စာရငျ လုံးပွီး ကွီးထှကျလာသညျ။ တငျပါးတှကေလညျး ဘေးကို ကားထှကျလာသညျမှာ တျောတျောလေး သိသာသညျ။ နို့ကွီးတှကေို ကွညျ့ပွီး ကို တဈယောကျ ဒီ နို့တှကေို စို့ပေးရငျ သိပျကောငျးမှာပဲ ဆိုပွီး ဖီးလျတှေ တကျလာသညျ။ နို့တှကေို လုံးခွနေမေိသညျ။ မိမိဘာသာ ကောငျးတာတောငျ တျောတျောလေး ကောငျးနသေညျ။ ထိုစဉျ အိမျရှေ့ လူချေါခေါငျးလောငျးမှ အသံ မွညျလာသညျ။ ဒျေါစိနျအေး စောထှကျလာသညျ အထငျနှငျ့ အဝတျအစား ကောကျဝတျလိုကျသညျ။
အိမျမှာ တဈယောကျထဲ ရှိနတောကတကွောငျး၊ အနှိပျသညျကလညျး လူရငျး ဒျေါစိနျအေး ဖွဈနတောက တကွောငျးကွောငျ့ အတှငျးခံတှေ ဘာမှ မဝတျတော့ပဲ အိမျနရေငျး ဂါဝနျနှငျ့ ဝနျးဆကျ အကြီ သာ ဝတျလာခဲ့သညျ။ အပျေါကနေ အနှေးထညျပါးပါးလေး တဈထညျသာ ဝတျခဲ့သညျ။
အိမျတံခါးကို ဖှငျ့လိုကျတော့မှ ခွံဝ တှငျ့ စောငျ့နသေော ယောက်ခမ ဖွဈသူ ဦးအောငျ ကို တှလေို့ကျရသညျ။ လူတှနေ့ပွေီးတော့မှ အိမျထဲဝငျ အပျေါထပျ တကျကာ အဝတျ ပွနျဝတျနရေငျ ကွာမညျစိုးသောကွောငျ့ ပွနျဝငျမနတေော့ပဲ ခွံတခါး သှားဖှငျ့ပေးလိုကျသညျ။
“ဦးအောငျ… ဖုနျးလညျး ကွိုမဆကျဘူး… နောကျတဈပတျလောကျမှ လာမယျ ထငျနတော…” “ဟုတျတယျ… သီတာရေ… အမှနျက ခြောငျးသာကနေ ပွနျလာတာ… ဒါပွီးတာနဲ့ ပုဂံ ဆကျတကျမယျလို့ စီစဉျထားတာလေ… ဦးအောငျ ဘျောဒါ ကြျောစှာ့ကို သိတယျမလား…” “ဒီကောငျ စဖောကျတာနဲ့… မသှားဖွဈတော့ဘူး… ဒါနဲ့ပဲ သားတို့ဆီ ခဏ သှားနဦေးမှ ဆိုပွီး လာတာ…”
“သွျော… ဦးကြျောစှာလား… သူက မိနျးမကွောကျရတယျ ဆိုတော့… သူ့မိနျးမ ပါမဈ ဆကျမကလြို့ ထငျမယျ… ခိခိ…” “ဟုတျပါ့… အသအေခြာပဲ… ဒါနဲ့ သားရော… ဒီနေ့ ပိတျရကျ မဟုတျဘူးလား…” “ဦးအောငျ သားက အခု စင်ျကာပူ သှားနတေယျ… ခဏနရေငျတော့ viber ကနေ ဖုနျးလှမျးချေါမယျ ထငျတယျ…” “အေး… ဒီကောငျကတော့ ငါ့ထကျ ခွသှေကျတယျဟေ့… ငါ့လုပျငနျး ဒီကောငျ့ကို ဆကျလုပျခိုငျးတာ မှနျသှားပွီ… ညညျးဗိုကျတောငျ တျောတျော ထှကျလာပွီပဲ…” “ဟုတျတယျ… ဦးအောငျ.. အိမျထဲ ဝငျရအောငျ…”
ခွံတခါးဖှငျ့နရေငျးနဲ့ စကားကောငျးနရောမှ အိမျထဲသို့ လှညျ့ဝငျသောအခါ ဦးအောငျ ကပဲ ဦးဆောငျပွီး အရှကေ့ ဝငျသှားလိုကျသညျ။ မဝငျလို့လညျး မရ။ နရေောငျ လငျးလငျး တောကျတောကျ အောကျက သီတာရဲ့ ညဝတျပါးပါးလေးကနေ တဆငျ့ မွငျရသညျ့ သီတာ ကောကျကွောငျးက ဦးအောငျ ကို စိတျကွှစသေညျလေ။ ဒီကောငျမလေး ဘောငျးဘီ မဝတျထားပါလား ဆိုသညျက ညီတျောမောငျဆီကို သတငျးပို့လိုကျသညျ့ အလား တငျးကနဲ ဖွဈသှားသညျ။ မဖွဈခဘြေူး။ ညအိပျမနတေော့ပဲ၊ နလေ့ညျစာ စားပွီး ကိုယျ့အိမျကို ခကျြခငျြးပွနျမှ ဖွဈမညျ။
“ဦးအောငျ… ထမငျး စားတော့မလား…” “အေး… စားမယျဟာ… ဗိုကျဆာနတော တျောတျော ကွာပွီ… ညညျးလကျရာ မစားတာ ကွာလို့ လာဝငျစားတာ… “ဟီး… ဒီနတေ့ော့ သီတာ တဈယောကျထဲမို့ ပွီးစလှယျပဲ ခကျြလိုကျတယျ…” “အေးပါ… ဘာဖွဈဖွဈ စားမယျ…”ထိုစဉျ viber မှ သားဖွဈသူ နောငျရဲက သီတာ့ဆီကို လှမျးချေါတာ ကွားလိုကျသညျ။
“ကို… ဒီမှာ… ဦးအောငျ ရောကျနတေယျလေ… အကွောငျးမကွား ဘာမကွားနဲ့…” “ဟုတျလား… ကို… ဖဖေနေဲ့ ပွောလိုကျဦးမယျ…” “အေး… သား… အလုပျကိစ်စ သှားတာဆိုတော့ ကွာမှာလား…” “မကွာဘူး… ဖဖေေ… ၂ ရကျ ပဲ… အမြားဆုံး ၃ ရကျပေါ့…” “အေး… အေး… ဒါဆို ပွီးရော… အိမျမှာ ကောငျမလေးလညျး မတှတေ့ော့ သီတာ တဈယောကျထဲ ဖွဈနလေို့…” “အဲ့ဒါ ပွောမလို့… ဖဖေေ… ဖဖေေ တခွား လုပျစရာမရှိရငျ… အိမျမှာပဲ အိပျလိုကျပါလား… သီတာ တဈယောကျထဲ ဖွဈလို့ စိတျပူလို့… အခု ခတျေကလညျး သိပျကောငျးတာ မဟုတျဘူး…”
“ဟေ… တခွားတော့ ဘာမှ လုပျစရာ မရှိပါဘူး… ခရီးသှားဘို့ ပကျြသှားတာနဲ့ စောစော ပွနျလာဖွဈတာလေ…” “ဒါဆိုလညျး သားပွနျလာတဲ့ အထိ စောငျ့ပေးပါ… ဖဖေရော…” “အေးပါကှာ… မငျးသာ အလုပျကို သခြော လုပျလာခဲ့…” “အဖသေ့ားပါ… ဒါလောကျတော့ အေးဆေး… ခဏနရေငျ အလုပျကိစ်စ စကားပွောတော့မှာလေ…အဖေ… သီတာ့ဆီ ဖုနျး ပွနျပေးပေး…” “အေး… အေး… ခဏကိုငျထား…” “ကို… ပွော…” “သီတာ… ခုဏက အဖနေဲ့ ပွောတာ ကွားတယျမလား… အဲ့ဒါ ကို ပွနျလာတဲ့ အထိ အဖကေို့ အိမျမှာ စောငျ့အိပျခိုငျးထားတယျ…”
“အိုခေ… ကို… ကိုလညျး ဂရုစိုကျဦးနျော… ဘာပွောစရာ ရှိသေးလဲ…” “မရှိပါဘူး… ကိုလညျး ခဏနေ… အလုပျကိစ်စ စကားပွောတော့မှာ… ပွီးမှ လှမျးချေါလိုကျမယျ…” “ဟုတျ… သီတာ ပွောတဲ့ နရောလညျး သှားဘို့ မမနေဲ့နျော…”
“ဟားဟား… အိုခေ… ကို သှားလိုကျမယျ…” နောငျရဲနှငျ့ စကားပွောပွီးသောအခါ ခြှေးမဖွဈသူနှငျ့ ၂ ယောကျထဲ တဈအိမျထဲ ညအိပျရမညျဆိုသောကွောငျ့ ရငျထဲ အပူလုံးကွီး ကွှလာသညျ။ ထမငျးစားနရေငျးနှငျ့ ရေ ခဏခဏ သောကျရသညျ။ ထမငျးစားသောကျပွီးတော့ အိမျရှေ့ ဧညျ့ခနျးမှာ ထိုငျနတေုနျး အနှိပျသညျ ဒျေါစိနျအေး ရောကျလာသညျ။ တံခါးသှားဖှငျ့ပေးပွီး ဒျေါစိနျအေးနှငျ့ အတူ ဧညျ့ခနျးထဲ ပွနျဝငျလာသော သီတာက ဦးအောငျကို လှမျးပွောသညျ။
“ဦးအောငျရေ… သီတာ… အညောငျးမိနလေို့… အနှိပျခံလိုကျဦးမယျ…” “ဟေ… ဦးအောငျလညျး အနှိပျခံခငျြလို့… ရလား… မစိနျအေး…” “မရတော့ဘူး… ဦးအောငျရေ… ကမြ က ခဏပဲ အခြိနျရတာ… ပွီးရငျ လှတျတျော အမတျကို သှားနှိပျပေးရဦးမယျ… တဈယောကျပဲ နှိပျပေးလို့ ရမှာ…” “ညညျးကလညျး… မရရငျ မရဘူးပေါ့… ငါ့ကို လှတျတျော အမတျနဲ့တောငျ ခြိနျးခွောကျလိုကျသေးတယျ…” “ဟီး… တကယျပွောတာပါ… ဦးအောငျရ…” “ဒါဆို သီတာ အနှိပျမခံတော့ဘူးလေ… နောကျနေ့ ရသေးလား… ဒျေါစိနျအေး… နောကျနမှေ့ နှိပျတော့မယျ…” “ဒီတပတျ မအားဘူး… သီတာရေ… မနကျဖနျကရြငျ နပွေညျတျော တကျရမှာ…”“မစိနျအေးရယျ… ညညျးမလဲ အစိုးရထကျတောငျ အလုပျမြားနသေေးတယျ…”
“ဦးအောငျ… ဦးအောငျပဲ အနှိပျခံလိုကျတော့… သီတာက နောကျတဈပတျမှ အနှိပျခံတော့မယျ…” “ရပါတယျ… သီတာပဲ အနှိပျခံတော့…” “ကဲ… ဒီ ၂ ယောကျကတော့ မွနျမွနျ ရှေးကရြှငျ… ကမြ အခြိနျမရပါဘူးဆိုမှ…” “ကဲပါ… သီတာပဲ အနှိပျခံတော့… ဗိုကျကွီးသညျ ဆိုတော့ ညောငျးညာနမှော… သှား… သှား…” သို့နှငျ့ သီတာက သူတို့ အိပျခနျးဆီသို့ ဒျေါစိနျအေးကို ချေါသှားလိုကျသညျ။ ဦးအောငျလညျး ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ ထိုငျကာ DVD ခှကွေညျ့ရနျ မှနှေောကျကွညျ့လိုကျတော့၊ အမြားဆုံးက ကိုရီးယားကားတှေ သာ တှရေ့သညျ။ ကွညျ့ခငျြစိတျ မရှိတော့ပဲ၊
မိမိ အခနျး ရှိရာ အောကျထပျက အိပျခနျးလေးထဲ ဝငျပွီး တရေးတမော အိပျနတေော့သညျ။ ပွနျနိုးလာတော့ နာရီ ကွညျ့လိုကျတော့ ညနေ ၄ နာရီတောငျ ခှဲနပွေီ။ အိပျခနျးအပွငျ ထှကျလာတော့ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ ကိုရီးယားကား ကွညျ့နသေညျ့ သီတာကို တှရေ့သညျ။ “ညညျးလညျး ကိုရီးယားကား ကွညျ့တာ မပကျြဘူးနျော… အရငျအတိုငျးပဲ…” “ဟီး… ဦးအောငျကလညျး… သီတာ အလုပျ လုပျရငျ စိတျနှဈပွီး လုပျတယျလေ… အားလပျခြိနျဆို ဒါလေးနဲ့ပဲ အပနျးဖွရေတာ… အခုတော့ အလုပျ လုပျစရာ မရှိတော့ ဒါပဲ ကွညျ့ဖွဈတာပေါ့…”
“ကဲ… ဦးအောငျ ရခြေိုးလိုကျဦးမယျ… ပွီးရငျ အပွငျမှာ ထှကျစားရအောငျ… ဦးအောငျ လိုကျကြှေးမယျ…” “ဟေး… ဒါမှ ဦးအောငျကှ…” “ငါ နငျ့ယောက်ခမ ဖွဈနပွေီလေ… အလုပျထဲက အတိုငျး အျောမနနေဲ့…” “ဟီး… အကငျြ့ပါသှားလို့ပါ… ဦးအောငျရ…” “ဦးအောငျ… ရခြေိုးခနျးထဲမှာပဲ အဝတျတှေ ပုံထားလိုကျ… သီတာ မနကျဖနျကရြငျ အဝတျလြှျောရငျးနဲ့ တခါထဲ လြှျောလိုကျမယျ… အဲ့ဒါကွောငျ့ ပွောတာ…. သီတာတို့နဲ့ အတူ လာနပေါလို့… ဝယေဝစ်စ လုပျပေးလို့ ရတာကို…”
“နပေါစဟော… ငါ့ဘာသာ လှတျလှတျလပျလပျ နပေါရစေ…”ရခြေိုးခနျးဘကျကို ထှကျသှားသော ဦးအောငျသညျ ကြောဘကျမှာ ရှိနျးကနဲ ဖွဈသှားသညျ။ မိမိကို လူတဈယောကျ ကွညျ့နမေညျ ဆိုလြှငျ ဖွဈသှားတတျသော မသိစိတျထဲက ခံစားခကျြမြိုးပေါ့။ အနောကျ လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့လညျး သီတာက တီဗှီဘကျကို မကျြနှာမူလို့ ကိုရီးယားကား ကွညျ့ကောငျးနတေုနျး။ စိတျအထငျ ဖွဈမှာပါလဟေု တှေးကာ ရခြေိုးနလေိုကျသညျ။ တကယျတော့ ကြျောစှာတို့နှငျ့ ခြောငျးသာ သှားတာ မှနျသျောလညျး ပုဂံသှားမှာကတော့ ကြျောစှာတို့နှငျ့ မဟုတျ။
သူနှငျ့ လတျတလော ဒိတျနသေော ကောငျမလေးနှငျ့ ဖွဈသညျ။ သှားခါနီးမှ သူ့အမေ နမေကောငျးဟူသော အကွောငျးပွခကျြဖွငျ့ မသှားဖွဈခွငျး ဖွဈသညျ။ ခရီး အတူသှားလြှငျ ထိုကောငျမလေးကို လုပျရတော့မညျမှာ သခြောသဖွငျ့ အားမှေးထားသျောလညျး ခုတော့ တောငျမောကွီး ဖွဈခဲ့ရသညျ။ ရခြေိုးနရေငျးနှငျ့ ဆပျပွာတိုကျပွီး ကိုယျ့ဘာသာ ကှငျးထုနတေော့သညျ။ သို့သျောလညျး စိတျက အာသာမပွေ။ ရခြေိုးတာ ကွာလြှငျ သီတာ တမြိုး တှေးမညျ စိုးသောကွောငျ့ ကှငျးတိုကျတာကို ရပျကာ အပွငျ ပွနျထှကျလာတော့သညျ။
သီတာ ကွိုကျတတျသော တရုတျတနျး ရှတေောငျတနျးလမျးက စကားဝါဆိုသော ကွေးအိုးဆိုငျသို့ သှားကာ စားသောကျကွသညျ။ ဟိုးအရငျ အလုပျ အတူတူ လုပျတုနျးကဆို အခုလိုပဲ ဝနျထမျးတှနှေငျ့ အတူ ညစာ ထှကျစားကွသညျ။ ခုတော့ သီတာလို့ ချေါတဲ့ အတှငျးရေးမှူး တဖွဈလဲ ခြှေးမ နှငျ့ပေါ့။ စားသောကျပွီး ပွနျတော့၊ တရုတျတနျး orange မှာပဲ ဈေးဝငျဝယျကွသညျ။ ဦးအောငျ သောကျတတျတာကို သိတော့ သီတာက ဘီယာ ဝယျလာပေးသညျ။ ပွနျထှကျတော့ ၁၉ လမျးထိပျက ဆာတေး အကငျဆိုမှာ ဝကျဆာတေးကငျ၊ ငါးကငျ ခဲပတျနှငျ့ အမဲ အူစုံသုပျ ဝယျလာသညျ။
အငျး… မွနျမွနျသောကျပွီး မွနျမွနျ အိပျတာပဲ ကောငျးမညျဟု ဦးအောငျကတော့ တှေးနသေညျပေါ့လေ။
အိမျပွနျရောကျတော့ ဧညျ့ခနျးထဲမှာပဲ အမွညျးနှငျ့ ဘီယာ စီစဉျပေးပွီး၊ ဦးအောငျက ဘီယာသောကျ၊ သီတာက အမွညျးစားလိုကျနှငျ့ လကေနျနသေညျပေါ့။ ဘီယာ ၂ ဗူးလောကျ ကုနျတော့ ပွောစရာ စကားလညျး သိပျမရှိတော့။ ဇာတျလမျးခှေ ကွညျ့ရနျ သီတာက ပွောသညျ။
“နလေ့ညျက ငါ ရှာကွညျ့သေးတယျ… ကိုရီးယားကားတှခေညျြးပဲ… ဒါနဲ့ ငါလညျး မကွညျ့တော့တာ…” “ဦးအောငျ သားကို သပျသပျ သိမျးခိုငျးထားတာ… သီတာ့ ကိုရီးယား ကားတှနေဲ့ ရောမှာ စိုးလို့… သီတာလညျး သူ့ကားတှေ စိတျမဝငျစားလို့ ကိုငျတောငျ မကွညျ့ဘူး… နဦေး… သီတာ သှားယူပေးမယျ…” လှုပျလီလှုပျလဲ့ နှငျ့ ဖငျကို ရမျးကာ ထှကျသှားသော သီတာ့ကို ကွညျ့ပွီး ငါတော့ မွနျမွနျ အိပျမှ ရမယျ ထငျတယျ ဟု တှေးတာ ဘီယာ ၁ ဗူး ထပျဖှငျ့ကာ non-stop သောကျခလြိုကျသညျ။ ကုနျသှားတော့မှ စားပှဲပျေါက ဝကျဆာတေး ၁ ကငျကို ကောကျဝါးလိုကျသညျ။ ခေါငျးက အူလညျလညျနှငျ့ ဖွဈနသေညျ။
သီတာ ပွနျထှကျလာသော လကျထဲမှာ CD ထညျ့သညျ့ အိတျကွီး တဈအိတျ ပါလာသညျ။ ဦးအောငျ လကျထဲကို ထိုးထညျ့ကာ အမွညျးကုနျတော့မှ အိမျမှာ ရှိတဲ့ အခွောကျအခွမျး သှားယူပေးမယျ ဆိုပွီး ထှကျသှားလရေဲ့။ အိတျရဲ့ ဇဈကို ဖှငျ့ပွီး ခှတှေကေို ကွညျ့လိုကျတော့ အမြားစုက အောကားတှေ။ နောငျရဲလညျး ငါ့သှေးပမေို့ ငါ့လိုပဲ ဒီကိစ်စ ဝါသနာ တျောတျောကွီးတာပဲဟု ကွံဖနျ ဂုဏျပွုလိုကျသေးသညျ။ အနညျးကဉျြး ဖွဈတဲ့ ကားထဲမှာမှ သီတာလညျး ကွညျ့လို့ရအောငျ Mr.Bean ဟာသကားပဲ ရှေးလိုကျသညျ။ သီတာ ပွနျရောကျလာတော့ ခှေ ထိုးပေးပွီး ဖှငျ့ခိုငျးလိုကျသညျ။
သီတာက အခွောကျအခွမျးတှေ အပွငျ ကွကျဥကွျောလာပေးသညျ။ ရလေညျး ယူလာပေးသောကွောငျ့ ခွောကျနသေော အာခေါငျကို စိုစှတျအောငျ ရေ တဂှတျဂှတျ နှငျ့ သောကျခလြိုကျသညျ။ Mr.Bean ကား ကွညျ့တော့လညျး ရယျရလှနျးလို့ အမူးတောငျ ပွမေလိုပငျ ဖွဈသညျ။ ဒါနဲ့ သောကျလိုကျ၊ ပေါကျလိုကျနှငျ့ Mr.Bean ကားကို ကွညျ့နလေိုကျသညျ။ ခရီးသှားထားတာကနေ ညောငျးညာလို့ လကျကလညျး မိမိ ခွသေလုံးကို မိမိ ပွနျနှိပျပေးနမေိသညျ။ ဒါကို သီတာက မွငျသှားသညျ။
“ဦးအောငျ… သီတာ နှိပျပေးမယျလေ… အဲ့ဒါကွောငျ့ ပွောတာ… ညနတေုနျးက အနှိပျခံလိုကျပါဆိုတာကို…” “နပေါအေ… ညညျးက မပေါ့မပါးကွီးနဲ့ကို…” “လုပျပွနျပွီ… သားဖွဈသူကလညျး ဒီမပေါ့မပါးကွီးကိုပဲ ခလုတျတိုကျပွီး… အဲ…” “ဘာဖွဈလို့လဲ…” “ဟီး… ဘာမှ မဟုတျဘူး… သီတာက မပေါ့မပါးပမေယျ့ လုပျနိုငျ ကိုငျနိုငျပါတယျ… ဒါကို ဟိုဟာ မလုပျနဲ့ ဒီဟာ မလုပျနဲ့ ဆိုပွီး ပွောနလေို့…” “သွျော… ဒါတော့ သူ့ရငျသှေး ထိခိုကျမှာ စိုးလို့ပေါ့…” “ကဲပါ… သီတာ နှိပျပေးမယျ… ဦးအောငျ ဘာသာ အေးဆေး နပွေီး ခှကွေညျ့နေ…” တားလညျး မရမယျ့ အတူတူ သီတာ အနှိပျကို ခံရတော့မညျ။
ဦးအောငျ ထိုငျနသေော ၂ ယောကျထိုငျ ဆိုဖာကွီးဆီသို့ သီတာက လာထိုငျသညျ။ ဦးအောငျကို လှဲအိပျစလေိုကျကာ သီတာရဲ့ ပေါငျပျေါသို့ ဦးအောငျရဲ့ ခွသေလုံးကို တငျခိုငျးပွီး သီတာက နှိပျပေးပါတော့သညျ။ သီတာကတော့ နလေ့ညျက တှခေဲ့တဲ့ အိမျနရေငျး အကြီပါပဲ။ ဒီတခေါကျလညျး အတှငျးခံတှေ မဝတျလာဘူး ထငျသညျ။ ဦးအောငျကတော့ ညအိပျလြှငျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖွဈသညျ့ ပုဆိုးသာ ဝတျအိပျတတျသညျ။ အတှငျးခံဘောငျးဘီကွပျကွပျက လူပြို ဖွဈထဲက ဝတျလေ့ မရှိပေ။ ဘောကျဆာ သာ ဝတျလရှေိ့သညျ။
ဦးအောငျရဲ့ ခွသေလုံးတှကေို နှိပျပေးနသေော သီတာ့ကို မကွညျ့မိအောငျ ထိနျးကာ တီဗှီဘကျကိုပဲ ခေါငျးလှညျ့ပွီး ကွညျ့နသေညျ။ ကွာတော့လညျး ဇကျညောငျးလာသောကွောငျ့ ခေါငျးအတညျ့ထားကာ မွငျနရေသညျ့ သီတာ့ကိုပဲ ကွညျ့မိနတေော့သညျ။ အနှိပျသညျ အစဈ မဟုတျသောကွောငျ့ သီတာ နှိပျနသေညျမှာ ဦးအောငျအတှကျ ဘာမှ ထူးခွားပွီး အညောငျး မပွပေမေယျ့ ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျရဲ့ အထိအတှကွေ့ောငျ့ သာယာလာသညျ။ ညီတျောမောငျကလညျး ၃၀% လောကျ တောငျလာသညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ ရှိနကြေ အရှယျအစားထကျ နညျးနညျး ဖောငျးပှလာသျောလညျး ထောငျမတျသညျ့ အဆငျ့တော့ မရောကျသေး။ အရကျ မူးနတောကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျသညျ။
သီတာက ခွသေလုံးကို နှိပျနရောမှ ပေါငျကို တဆငျ့တကျပွီး နှိပျပေးသညျ။ ဒီတော့မှ အခွအေနကေ ပိုဆိုးသှားသညျ။ ညီတျောမောငျက ထောငျသထကျ ထောငျလာသညျ။ ဒီပုံအတိုငျးဆို ပုဆိုးကနေ ဖောငျးတကျနသေညျ့ ညီတျောမောငျကို သီတာ မွငျမညျမှာ မလှဲ။ ရှကျရှကျနှငျ့ မကျြလုံးမှိတျထားလိုကျသညျ။ သီတာ့ရယျသံ ကွားတော့မှ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ တီဗှီကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့လညျး ဘယျအခြိနျထဲက ပိတျထားမှနျးမသိသော တီဗှီစကရငျ မဲမဲကွီးသာ မွငျရသညျ။
“ခိခိခိခိ…” “ဘာဖွဈလို့လဲ… သီတာ…” “ဒီမှာ… ကွညျ့လေ… ဦးအောငျရဲ့ နဂါးကွီး နိုးနတောကိုး…” “ညညျးက နှိပျတော့လညျး ဖွဈမှာပေါ့ဟ…” “ဟငျ… အရငျ ဒျေါစိနျအေး နှိပျပေးတာပဲ… အဲ့လို ဖွဈလို့လား…” “လူမှ မတူတာ… သူက ညညျးလို ခြောခြောလှလှလေးမှ မဟုတျတာ…” “ခိခိ… ဦးအောငျကတော့ ပွောတော့မယျ…” ဒီပုံအတိုငျးဆို ကွိုးခငျြးငွိတော့မညျကို တှေးမိပွီး စကားလမျးကွောငျးကို အမွနျပွောငျးလိုကျတော့မှ ပိုဆိုးသှားတော့သညျ။
“နောငျရဲရော ဖုနျးဆကျသေးလား…” “အငျး… ညနေ ဦးအောငျ အိပျနတေုနျးက ဆကျတယျ… အိပျနရေငျ မနှိုးပါနဲ့တော့ဆိုလို့…” “ညရော မဆကျဘူးလား… ဒီကောငျတော့… ကိုယျ့မိနျးမကို ပဈထားတယျ…” “ခိခိ… သူ့ကို ဂလေနျး သှားခိုငျးထားတာလေ…” “ဘာရယျ…” “ဟီး… ဟုတျတယျ… သီတာ့ကို မပေါ့မပါးကွီးနဲ့ ဆိုပွီး သူက ဟို… ဟို… မဆကျဆံဘူးလေ… အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဟိုရောကျရငျ သှားဖွဈအောငျ သှားဆိုပွီး လှတျလိုကျတာ…” “သွျော… ညညျးက မပေါ့မပါးနဲ့ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ စိတျတှေ မရှိတော့ဘူးပေါ့…”
“ဘယျဟုတျပါ့မလဲ… ဦးအောငျရ…” စကားမှားပွီး လှနျသှားပွီဆိုသညျ့ ဟနျဖွငျ့ သီတာသညျ ဆကျမပွောတော့ပဲ ခေါငျးငုပျကာ ရှကျနတေော့သညျ။ ခေါငျးငုပျပွီး ရှကျတာက အကွောငျးမဟုတျ။ သီတာက ပေါငျကို နှိပျနရေငျးနဲ့မှ ပေါငျရငျးကို ရောကျကာ ညီတျောမောငျကိုလညျး မထိတထိ အနအေထား ဖွဈသှားသညျ။ ဒီလို အခွအေနေ ဖွဈလာတော့မှ ဦးအောငျလညျး မထူးဇာတျ ခငျးရတော့မညျ။ ညီတျောမောငျကို မထိတထိ ဖွဈနသေော သီတာ့လကျကို ဆုတျကိုငျပွီး ညီတျောမောငျဆီ အရောကျပို့လိုကျသညျ။ ၂ ယောကျသား အကွညျ့ခငျြး ဆုံသှားသညျ။ ဘာစကားမှ မပွောတော့။
ကိုယျ့အလုပျ ကိုယျလုပျရမညျ ဆိုတာကို အလိုအလြောကျ သိသှားတော့သညျ။ ပုဆိုးကို ဖွလြှေော့ပေးပွီး တောငျမတျနသေော ညီတျောမောငျကို သီတာက ကှငျးတိုကျပေးတော့သညျ။ ပွီးတော့ ဦးအောငျကို မတျတတျရပျခိုငျးပွီး သီတာရဲ့ ပုလှအေစှမျး ပွတော့သညျ။ အရကျတနျခိုးကွောငျ့ ၂ ဆ တိုးပွီး သှေးကွောတှေ ထောငျထှကျနသေော ညီတျောမောငျကလညျး တျောရုံနှငျ့ မပွီးပေ။ ဒီတခါတော့ ဦးအောငျ အလှညျ့ပေါ့။ သီတာ့ကို ဆိုဖာခုံမှာ လှဲခိုငျးလိုကျပွီး ဘာဂြာအစှမျးပွတော့သညျ။ နောငျရဲက မထိရကျ မကိုငျရကျသော ရငျသား ၂ မှာ ကိုရော၊ အမှေးနုနုတှနှေငျ့ ဖောငျးပှနသေော ညီမလေးကိုရော ကိုငျသညျ၊ စုပျသညျ၊ ပွီးတော့ ထငျရာဆိုငျးပါတော့သညျ။ ၂ ယောကျထဲ ရှိသော အိမျလေးသညျ အသံတှေ ဆူညံနလေို့ပေါ့။
“အဲ့ဒါကွောငျ့ သီတာ့ကို ပွောတာပေါ့… ဦးအောငျ ဒီမှာ သီတာတို့နဲ့ အတူတူ မနခေငျြတဲ့ အကွောငျးရငျး…” “အဲ့ဒါကွောငျ့ သီတာကလညျး ဦးအောငျကို ပွောတာပေါ့… သီတာတို့နဲ့ လာနစေခေငျြတဲ့ အကွောငျးရငျး…” “သွျော… သီတာရယျ…” (နောငျရဲရေ… မငျး ငါ့မိနျးမ နို့ကို စို့ထားတာ… ငါလညျး မငျးမိနျးမ နို့ကို စို့တာ မငျး အပွဈမွငျမှာ မဟုတျပါဘူးနျော…)
၂ ရကျလောကျ အခြိနျရသဖွငျ့ ဦးအောငျနှငျ့ သီတာမှာ ကွငျစဦး ဇနီးမောငျနှံ ပမာ။ နောငျရဲ ပွနျလာတော့ အရာ အားလုံးက ပုံမှနျ ပွနျဖွဈသှားသညျ။ ထူးခွားသညျမှာက ဦးအောငျသညျ သားဖွဈသူ ခြှေးမဖွဈသူတို့ဆီ အလညျလာတာ မြားလာကာ၊ နောကျတော့ ဟိုဘကျအိမျကို ရောငျးလိုကျပွီး အတူတူ နကွေတော့လသေညျ။ ပီး
“သီတာရေ… သီတာ…” “ရှင်… ကို… လာပြီ…” “ဝှူး… မောလိုက်တာကွာ…” “ရော့… ကို… ရေအေးအေးလေး သောက်လိုက်…” “လိမ္မာလိုက်တဲ့ မိန်းမ…” နောင်ရဲသည် သီတာ လှမ်းပေးသော ရေခွက်ထဲမှ ရေကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး ဧည့်ခန်းထဲမှ ဆိုဖာခုံတွင် ထိုင်ကာ ရေကို မော့ချလိုက်သည်။ သီတာကတော့ နောင်ရဲ ကမ်းပေးသည့် အိတ်တွေကို လှမ်းယူပြီး အိပ်ခန်းထဲ ဝင်ကာ စားပွဲခုံပေါ် သွားတင်ထားသည်။ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာသော သီတာ့ကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။
“သီတာရေ… လာပါဦး… ပြောစရာ ရှိလို့…” “အင်း… ပြောလေ… ကို…” “ကို… မနက်ဖန်ကျရင် စင်္ကာပူကို အလုပ်ကိစ္စ သွားရမှာ… အဲ့ဒါ ၂ ရက် တော့ ကြာမယ်… သီတာ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်ပါ့မလား…” “ဖြစ်ပါတယ်… ကိုရ…” “အိမ်အကူ ကောင်မလေးတွေကို ရွာပြန်လွှတ်လိုက်တော့… သီတာ တစ်ယောက်ထဲ ကျန်မှာ စိုးရိမ်တယ်…” “မစိုးရိမ်နဲ့… ဘာမှ မဖြစ်ဘူး… ကို သာ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ အလုပ်ကိစ္စ လုပ်စရာ ရှိတာ လုပ်… ပြီးတော့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ ပျော်ချင် ပျော်လာခဲ့… ခိခိ… ဂေလန်း သွားလိုက်ဦးနော်…” “ဟာ… မသွားပါဘူး.. သီတာကလဲ…” “သွားပါ… ကိုရ… သီတာက အခု မပေါ့မပါးကြီးနဲ့… ကို့အလို ကို မဖြည့်ပေးနိုင်ဘူး… ကိုကလည်း သီတာ ဗိုက်ရှိတယ်ဆိုပြီး လုပ်မှ မလုပ်တာ…” “ရပါတယ်… သီတာက ကို့ကို ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးတာပဲကိုး…” “ခိခိ… အခုရော… လုပ်ပေးရမလား…”
“အင်း… အဲ့ဒါကြောင့် ချစ်တာ… နေဦး… ကို ရေချိုး လိုက်ဦးမယ်…” “ဒါဆို သီတာ ပါ လိုက်မယ်လေ… တခါထဲ ဂျီးပါ တွန်းပေးမယ်…” “ဟားဟား… လာခဲ့…” ချစ်မိန်းမ သီတာ့ကို ဆွဲထူလိုက်ကာ ပုခုံးမှ ဖက်ပြီး ရေချိုးခန်းသို့ ခေါ်သွားလိုက်သည်။ သီတာက ပုလွေ မှုတ်တာတော့ တကယ့်ရှယ်ပါ။ အဲ့… ပုလွေ တစ်ခုထဲ ကောင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အကုန် ကောင်းတယ်။ မြင်းစီးလည်း ကောင်းသလို၊ ဒေါ့ဂီပုံစံ ဆိုရင်လည်း စွင့်နေအောင် ကားထားတဲ့ တင် က တကယ့်ရှယ်ကြီး။ ကိုယ်ဝန် မရခင်တုန်းကတော့ ၂ ယောက်သား တက်ညီလက်ညီ တဖြောင်းဖြောင်း တဒိုင်းဒိုင်း တဒုန်းဒုန်း တပြွတ်ပြွတ် နဲ့ နေ့ရော ညရော ချစ်တင်းနှောကြသည်။ အခုတော့ ကိုယ်ဝန် ရှိလာတော့ သားဦးလေး ဆိုတော့လည်း ကိုယ်ဝန် ထိမည်ကို စိုးသဖြင့် သီတာက ခွင့်ပြုသည့်တိုင် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့။ သီတာ့ ပုလွေနဲ့ပဲ စခန်းသွားတာ များသည်။ အခုလည်း ရေချိုးခန်းထဲက ရေချိုးဇလုံ (bathtub) ထဲမှာ ၂ ယောက်သား ဝင်စိမ်ပြီး ဆပ်ပြာတိုက်ကာ အချင်းချင်း ဂျီးတွန်းနေကျသည်။ နောင်ရဲရဲ့ ညီတော်မောင်ကတော့ ထောင်မတ်လို့ပေါ့။ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားမှ သီတာသည် နောင်ရဲကို ဂျီးတွန်းပေးရာမှ ညီတော်မောင်ကို ကိုင်ကာ ကွင်းတိုက်ပေးတော့သည်။ ရေထဲမှာ ဆပ်ပြာရည်တွေနှင့် ဆိုတော့ ချောနေတာပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ နောင်ရဲကို ရေချိုးဇလုံရဲ့ ဘောင်ပေါ်မှာ တက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး ညီတော်မောင်မှာ ရှိတဲ့ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေကို ရေပန်းနှင့် ဆေးချလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ညီတော်မောင် အရင်းကို လက်နှင့်ကိုင်ကာ ပါးစပ်ထဲကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထည့်ပြီး စုပ်တော့သည်။ တခါတလေ ညီတော်မောင်ရဲ့ အကွဲကြောင်းလေးကို လျာဖျားနှင့် တို့ထိကာ ကစားနေသေးသည်။ ညီတော်မောင်ကို စုပ်နေရင်းနှင့်လည်း ဥ တွေကို အပြုံလိုက် ကိုင်ကာ ဖွဖွလေး လုံးခြေလိုက်၊ ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး စုပ်လိုက်နှင့် ဆိုတော့ တော်တေ်ာလေး ခံစားလို့ ကောင်းသည်။
သီတာရဲ့ အပြုအစုအောက်မှာ ကျဆုံးခဲ့ရပေါင်း မနည်းသော နောင်ရဲရဲ့ ညီတော်မောင်သည်လည်း အမှတ်သည်းခြေ မရှိ ကျဆုံးပြန်သည်။ ညီတော်မောင်မှ ထွက်လာသမျှ အရည်တွေကို တပြွတ်ပြွတ်နှင့် စုပ်ရင်း မြိုချနေသည့် သီတာကို ကြည့်ကာ အချစ်စိတ်တွေလည်း များသထက် များလာသည်။
နောင်ရဲရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလေး ထူထောင်ထားသောကြောင့် အခုလို နေထိုင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သီတာ ဆိုသည်မှာလည်း နောင်ရဲ ရဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူ ဦးအောင် ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး လုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် ထက်မြက်သူမို့ ဖခင်ဖြစ်သူက သီတာ တော်လွန်းကြောင်း မိသားစု ထမင်းဝိုင်းတွင် တဖွဖွ ပြောသည်။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာ နောင်ရဲသည် ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်သင်အဖြစ် ပညာသင်ယူ အလုပ်ဝင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သီတာ အလုပ်ဝင်ပြီး ၅ နှစ်လောက် ကြာတော့ နောင်ရဲ ရဲ့ မိခင်သည် ရင်သားကင်ဆာ ဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်။
မိန်းမ သေဆုံးပြီးနောက် ဦးအောင်သည် အသက် ၅၅ နှစ်လောက်သာ ရှိသေးသော်လည်း နောက် အိမ်ထောင် မပြုတော့။ အိမ်ထောင် မပြုသော်လည်း တခါတရံ အပျော်အပါးလေးတွေတော့ ရှိတတ်သည်။ သီတာ့ကိုတော့ ဦးအောင်သည် မထိ။ နောင်ရဲကိုလည်း မိမိ လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် ဦးဆောင်စေကာ သီတာနှင့် အလုပ် အတူ တွဲလုပ်စေခဲ့သည်။ အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ ဆိုသည့်အတိုင်း လူငယ်တွေ ဖြစ်သည့် နောင်ရဲ နှင့် သီတာတို့ ထိကြ ငြိကြသည်။ နောင်ရဲနှင့် သီတာကို လက်ထပ်ပေးကာ မိမိတို့ လက်ရှိ အိမ်မှာပင် နေစေပြီး ဦးအောင်ကတော့ အိမ်ခွဲနေလိုက်သည်။
လူငယ်တွေကို လွတ်လပ်စေချင်သလို၊ မိမိလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေစေလိုသောကြောင့် ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပင် ခွဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။ တခါတလေတော့လည်း နောင်ရဲတို့ အိမ်ကို အလုပ်ပိတ်ရက်တွေဆို လာကာ တစ်ည နှစ်ညလောက် အိပ်တတ်သည်။ အခုလည်း ဦးအောင်သည် သူ့သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ခရီးထွက်နေသည်ဟုသာ ပြောသွားသည်။
မနက် မိုးလင်းတော့ နောင်ရဲသည် ဇနီးဖြစ်သူ သီတာ့ကို နှုတ်ဆက်ကာ ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ သီတာလည်း အိမ်တံခါး ပိတ်ပြီး အဝတ်လျှော်စက်ထဲ အဝတ်တွေ ထည့်ကာ လျှော်ထားခဲ့ပြီး၊ မိမိတို့ အိပ်ခန်းကိုသာ ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်သည်။ ကျန် အခန်းတွေကိုတော့ အိမ်အကူ ကောင်မလေး ပြန်လာမှ လုပ်ခိုင်းရမည်။ သူကလည်း တစ်ပတ်လောက် ပြန်မည်ဟု ပြောသဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီးတော့ မိမိ စားချင်နေသည့် ရှောက်သီးသုပ်၊ ကြက်ဥမွှေကြော်၊ ပဲနီလေးဟင်းချို နှင့် ငါးသလဲထိုးကြော် အပြင် ချဉ်ပေါင်ကြော် (ဝက်သားသုံးထပ်သားနှင့်) တို့ကို ချက်ပြုတ်တော့သည်။
ချက်ပြုတ်ပြီးတာနှင့် ကိုယ်လက်တွေ နည်းနည်း ထုံထိုင်းနေတာနဲ့ နှိပ်နေကျ ဖြစ်သော အနှိပ်သည် ဒေါ်စိန်အေးကို ဖုန်းလှမ်းဆက် ခေါ်လိုက်သည်။ တော်သေးသည်။ ဒေါ်စိန်အေး အားတဲ့ အချိန်နဲ့ တိုးလို့ နေ့လည် ၁ နာရီလောက် လာမည် ဟု ပြောသည်။ သူကလည်း လက်မလည်ဘူးလေ။ လက် တော်တေ်ာ ထိသည်ဟု ပြောရမည်။ အနှိပ်ခံဘို့ ချိန်းပြီးမှာတော့ လျှော်ထားသော အဝတ်တွေကို လှမ်းကာ၊ ရေချိုး ထားလိုက်သည်။ ရေချိုးခန်းထဲကနေ အထွက်မှာတော့ အဝတ်အစား မဝတ်ခင် ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်တွင် မိမိကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်နေမိသည်။ ဗိုက်က တော်တော်ကြီး ပူထွက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ အပျိုဗိုက်ဆိုတော့ ၄ လ လောက် အထိက သိပ်မပူပေမယ့် အခု ၆ လ လောက် ရောက်တော့ လုံးလုံးလေး ထွက်လာသည်။
နို့ကြီးတွေကလည်း အရင်ကထက် စာရင် လုံးပြီး ကြီးထွက်လာသည်။ တင်ပါးတွေကလည်း ဘေးကို ကားထွက်လာသည်မှာ တော်တော်လေး သိသာသည်။ နို့ကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး ကို တစ်ယောက် ဒီ နို့တွေကို စို့ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီး ဖီးလ်တွေ တက်လာသည်။ နို့တွေကို လုံးခြေနေမိသည်။ မိမိဘာသာ ကောင်းတာတောင် တော်တော်လေး ကောင်းနေသည်။ ထိုစဉ် အိမ်ရှေ့ လူခေါ်ခေါင်းလောင်းမှ အသံ မြည်လာသည်။ ဒေါ်စိန်အေး စောထွက်လာသည် အထင်နှင့် အဝတ်အစား ကောက်ဝတ်လိုက်သည်။
အိမ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေတာကတကြောင်း၊ အနှိပ်သည်ကလည်း လူရင်း ဒေါ်စိန်အေး ဖြစ်နေတာက တကြောင်းကြောင့် အတွင်းခံတွေ ဘာမှ မဝတ်တော့ပဲ အိမ်နေရင်း ဂါဝန်နှင့် ဝန်းဆက် အကျီ သာ ဝတ်လာခဲ့သည်။ အပေါ်ကနေ အနွေးထည်ပါးပါးလေး တစ်ထည်သာ ဝတ်ခဲ့သည်။
“ဦးအောင်… ဖုန်းလည်း ကြိုမဆက်ဘူး… နောက်တစ်ပတ်လောက်မှ လာမယ် ထင်နေတာ…” “ဟုတ်တယ်… သီတာရေ… အမှန်က ချောင်းသာကနေ ပြန်လာတာ… ဒါပြီးတာနဲ့ ပုဂံ ဆက်တက်မယ်လို့ စီစဉ်ထားတာလေ… ဦးအောင် ဘော်ဒါ ကျော်စွာ့ကို သိတယ်မလား…” “ဒီကောင် စဖောက်တာနဲ့… မသွားဖြစ်တော့ဘူး… ဒါနဲ့ပဲ သားတို့ဆီ ခဏ သွားနေဦးမှ ဆိုပြီး လာတာ…”
“သြော်… ဦးကျော်စွာလား… သူက မိန်းမကြောက်ရတယ် ဆိုတော့… သူ့မိန်းမ ပါမစ် ဆက်မကျလို့ ထင်မယ်… ခိခိ…” “ဟုတ်ပါ့… အသေအချာပဲ… ဒါနဲ့ သားရော… ဒီနေ့ ပိတ်ရက် မဟုတ်ဘူးလား…” “ဦးအောင် သားက အခု စင်္ကာပူ သွားနေတယ်… ခဏနေရင်တော့ viber ကနေ ဖုန်းလှမ်းခေါ်မယ် ထင်တယ်…” “အေး… ဒီကောင်ကတော့ ငါ့ထက် ခြေသွက်တယ်ဟေ့… ငါ့လုပ်ငန်း ဒီကောင့်ကို ဆက်လုပ်ခိုင်းတာ မှန်သွားပြီ… ညည်းဗိုက်တောင် တော်တော် ထွက်လာပြီပဲ…” “ဟုတ်တယ်… ဦးအောင်.. အိမ်ထဲ ဝင်ရအောင်…”
“ဦးအောင်… ထမင်း စားတော့မလား…” “အေး… စားမယ်ဟာ… ဗိုက်ဆာနေတာ တော်တော် ကြာပြီ… ညည်းလက်ရာ မစားတာ ကြာလို့ လာဝင်စားတာ… “ဟီး… ဒီနေ့တော့ သီတာ တစ်ယောက်ထဲမို့ ပြီးစလွယ်ပဲ ချက်လိုက်တယ်…” “အေးပါ… ဘာဖြစ်ဖြစ် စားမယ်…”ထိုစဉ် viber မှ သားဖြစ်သူ နောင်ရဲက သီတာ့ဆီကို လှမ်းခေါ်တာ ကြားလိုက်သည်။
“ကို… ဒီမှာ… ဦးအောင် ရောက်နေတယ်လေ… အကြောင်းမကြား ဘာမကြားနဲ့…” “ဟုတ်လား… ကို… ဖေဖေနဲ့ ပြောလိုက်ဦးမယ်…” “အေး… သား… အလုပ်ကိစ္စ သွားတာဆိုတော့ ကြာမှာလား…” “မကြာဘူး… ဖေဖေ… ၂ ရက် ပဲ… အများဆုံး ၃ ရက်ပေါ့…” “အေး… အေး… ဒါဆို ပြီးရော… အိမ်မှာ ကောင်မလေးလည်း မတွေ့တော့ သီတာ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေလို့…” “အဲ့ဒါ ပြောမလို့… ဖေဖေ… ဖေဖေ တခြား လုပ်စရာမရှိရင်… အိမ်မှာပဲ အိပ်လိုက်ပါလား… သီတာ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်လို့ စိတ်ပူလို့… အခု ခေတ်ကလည်း သိပ်ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး…”
“ဟေ… တခြားတော့ ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိပါဘူး… ခရီးသွားဘို့ ပျက်သွားတာနဲ့ စောစော ပြန်လာဖြစ်တာလေ…” “ဒါဆိုလည်း သားပြန်လာတဲ့ အထိ စောင့်ပေးပါ… ဖေဖေရာ…” “အေးပါကွာ… မင်းသာ အလုပ်ကို သေချာ လုပ်လာခဲ့…” “အဖေ့သားပါ… ဒါလောက်တော့ အေးဆေး… ခဏနေရင် အလုပ်ကိစ္စ စကားပြောတော့မှာလေ…အဖေ… သီတာ့ဆီ ဖုန်း ပြန်ပေးပေး…” “အေး… အေး… ခဏကိုင်ထား…” “ကို… ပြော…” “သီတာ… ခုဏက အဖေနဲ့ ပြောတာ ကြားတယ်မလား… အဲ့ဒါ ကို ပြန်လာတဲ့ အထိ အဖေ့ကို အိမ်မှာ စောင့်အိပ်ခိုင်းထားတယ်…”
“အိုခေ… ကို… ကိုလည်း ဂရုစိုက်ဦးနော်… ဘာပြောစရာ ရှိသေးလဲ…” “မရှိပါဘူး… ကိုလည်း ခဏနေ… အလုပ်ကိစ္စ စကားပြောတော့မှာ… ပြီးမှ လှမ်းခေါ်လိုက်မယ်…” “ဟုတ်… သီတာ ပြောတဲ့ နေရာလည်း သွားဘို့ မမေ့နဲ့နော်…”
“ဟားဟား… အိုခေ… ကို သွားလိုက်မယ်…” နောင်ရဲနှင့် စကားပြောပြီးသောအခါ ချွေးမဖြစ်သူနှင့် ၂ ယောက်ထဲ တစ်အိမ်ထဲ ညအိပ်ရမည်ဆိုသောကြောင့် ရင်ထဲ အပူလုံးကြီး ကြွလာသည်။ ထမင်းစားနေရင်းနှင့် ရေ ခဏခဏ သောက်ရသည်။ ထမင်းစားသောက်ပြီးတော့ အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေတုန်း အနှိပ်သည် ဒေါ်စိန်အေး ရောက်လာသည်။ တံခါးသွားဖွင့်ပေးပြီး ဒေါ်စိန်အေးနှင့် အတူ ဧည့်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာသော သီတာက ဦးအောင်ကို လှမ်းပြောသည်။
“ဦးအောင်ရေ… သီတာ… အညောင်းမိနေလို့… အနှိပ်ခံလိုက်ဦးမယ်…” “ဟေ… ဦးအောင်လည်း အနှိပ်ခံချင်လို့… ရလား… မစိန်အေး…” “မရတော့ဘူး… ဦးအောင်ရေ… ကျမ က ခဏပဲ အချိန်ရတာ… ပြီးရင် လွှတ်တော် အမတ်ကို သွားနှိပ်ပေးရဦးမယ်… တစ်ယောက်ပဲ နှိပ်ပေးလို့ ရမှာ…” “ညည်းကလည်း… မရရင် မရဘူးပေါ့… ငါ့ကို လွှတ်တော် အမတ်နဲ့တောင် ချိန်းခြောက်လိုက်သေးတယ်…” “ဟီး… တကယ်ပြောတာပါ… ဦးအောင်ရ…” “ဒါဆို သီတာ အနှိပ်မခံတော့ဘူးလေ… နောက်နေ့ ရသေးလား… ဒေါ်စိန်အေး… နောက်နေ့မှ နှိပ်တော့မယ်…” “ဒီတပတ် မအားဘူး… သီတာရေ… မနက်ဖန်ကျရင် နေပြည်တော် တက်ရမှာ…”“မစိန်အေးရယ်… ညည်းမလဲ အစိုးရထက်တောင် အလုပ်များနေသေးတယ်…”
“ဦးအောင်… ဦးအောင်ပဲ အနှိပ်ခံလိုက်တော့… သီတာက နောက်တစ်ပတ်မှ အနှိပ်ခံတော့မယ်…” “ရပါတယ်… သီတာပဲ အနှိပ်ခံတော့…” “ကဲ… ဒီ ၂ ယောက်ကတော့ မြန်မြန် ရွေးကျရှင်… ကျမ အချိန်မရပါဘူးဆိုမှ…” “ကဲပါ… သီတာပဲ အနှိပ်ခံတော့… ဗိုက်ကြီးသည် ဆိုတော့ ညောင်းညာနေမှာ… သွား… သွား…” သို့နှင့် သီတာက သူတို့ အိပ်ခန်းဆီသို့ ဒေါ်စိန်အေးကို ခေါ်သွားလိုက်သည်။ ဦးအောင်လည်း ဧည့်ခန်းထဲတွင် ထိုင်ကာ DVD ခွေကြည့်ရန် မွှေနှောက်ကြည့်လိုက်တော့၊ အများဆုံးက ကိုရီးယားကားတွေ သာ တွေ့ရသည်။ ကြည့်ချင်စိတ် မရှိတော့ပဲ၊
မိမိ အခန်း ရှိရာ အောက်ထပ်က အိပ်ခန်းလေးထဲ ဝင်ပြီး တရေးတမော အိပ်နေတော့သည်။ ပြန်နိုးလာတော့ နာရီ ကြည့်လိုက်တော့ ညနေ ၄ နာရီတောင် ခွဲနေပြီ။ အိပ်ခန်းအပြင် ထွက်လာတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ကိုရီးယားကား ကြည့်နေသည့် သီတာကို တွေ့ရသည်။ “ညည်းလည်း ကိုရီးယားကား ကြည့်တာ မပျက်ဘူးနော်… အရင်အတိုင်းပဲ…” “ဟီး… ဦးအောင်ကလည်း… သီတာ အလုပ် လုပ်ရင် စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်တယ်လေ… အားလပ်ချိန်ဆို ဒါလေးနဲ့ပဲ အပန်းဖြေရတာ… အခုတော့ အလုပ် လုပ်စရာ မရှိတော့ ဒါပဲ ကြည့်ဖြစ်တာပေါ့…”
“ကဲ… ဦးအောင် ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်… ပြီးရင် အပြင်မှာ ထွက်စားရအောင်… ဦးအောင် လိုက်ကျွေးမယ်…” “ဟေး… ဒါမှ ဦးအောင်ကွ…” “ငါ နင့်ယောက္ခမ ဖြစ်နေပြီလေ… အလုပ်ထဲက အတိုင်း အော်မနေနဲ့…” “ဟီး… အကျင့်ပါသွားလို့ပါ… ဦးအောင်ရ…” “ဦးအောင်… ရေချိုးခန်းထဲမှာပဲ အဝတ်တွေ ပုံထားလိုက်… သီတာ မနက်ဖန်ကျရင် အဝတ်လျှော်ရင်းနဲ့ တခါထဲ လျှော်လိုက်မယ်… အဲ့ဒါကြောင့် ပြောတာ…. သီတာတို့နဲ့ အတူ လာနေပါလို့… ဝေယဝစ္စ လုပ်ပေးလို့ ရတာကို…”
“နေပါစေဟာ… ငါ့ဘာသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေပါရစေ…”ရေချိုးခန်းဘက်ကို ထွက်သွားသော ဦးအောင်သည် ကျောဘက်မှာ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ မိမိကို လူတစ်ယောက် ကြည့်နေမည် ဆိုလျှင် ဖြစ်သွားတတ်သော မသိစိတ်ထဲက ခံစားချက်မျိုးပေါ့။ အနောက် လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လည်း သီတာက တီဗွီဘက်ကို မျက်နှာမူလို့ ကိုရီးယားကား ကြည့်ကောင်းနေတုန်း။ စိတ်အထင် ဖြစ်မှာပါလေဟု တွေးကာ ရေချိုးနေလိုက်သည်။ တကယ်တော့ ကျော်စွာတို့နှင့် ချောင်းသာ သွားတာ မှန်သော်လည်း ပုဂံသွားမှာကတော့ ကျော်စွာတို့နှင့် မဟုတ်။
သူနှင့် လတ်တလော ဒိတ်နေသော ကောင်မလေးနှင့် ဖြစ်သည်။ သွားခါနီးမှ သူ့အမေ နေမကောင်းဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မသွားဖြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခရီး အတူသွားလျှင် ထိုကောင်မလေးကို လုပ်ရတော့မည်မှာ သေချာသဖြင့် အားမွေးထားသော်လည်း ခုတော့ တောင်မောကြီး ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ရေချိုးနေရင်းနှင့် ဆပ်ပြာတိုက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ကွင်းထုနေတော့သည်။ သို့သော်လည်း စိတ်က အာသာမပြေ။ ရေချိုးတာ ကြာလျှင် သီတာ တမျိုး တွေးမည် စိုးသောကြောင့် ကွင်းတိုက်တာကို ရပ်ကာ အပြင် ပြန်ထွက်လာတော့သည်။
သီတာ ကြိုက်တတ်သော တရုတ်တန်း ရွှေတောင်တန်းလမ်းက စကားဝါဆိုသော ကြေးအိုးဆိုင်သို့ သွားကာ စားသောက်ကြသည်။ ဟိုးအရင် အလုပ် အတူတူ လုပ်တုန်းကဆို အခုလိုပဲ ဝန်ထမ်းတွေနှင့် အတူ ညစာ ထွက်စားကြသည်။ ခုတော့ သီတာလို့ ခေါ်တဲ့ အတွင်းရေးမှူး တဖြစ်လဲ ချွေးမ နှင့်ပေါ့။ စားသောက်ပြီး ပြန်တော့၊ တရုတ်တန်း orange မှာပဲ ဈေးဝင်ဝယ်ကြသည်။ ဦးအောင် သောက်တတ်တာကို သိတော့ သီတာက ဘီယာ ဝယ်လာပေးသည်။ ပြန်ထွက်တော့ ၁၉ လမ်းထိပ်က ဆာတေး အကင်ဆိုမှာ ဝက်ဆာတေးကင်၊ ငါးကင် ခဲပတ်နှင့် အမဲ အူစုံသုပ် ဝယ်လာသည်။
အင်း… မြန်မြန်သောက်ပြီး မြန်မြန် အိပ်တာပဲ ကောင်းမည်ဟု ဦးအောင်ကတော့ တွေးနေသည်ပေါ့လေ။
“နေ့လည်က ငါ ရှာကြည့်သေးတယ်… ကိုရီးယားကားတွေချည်းပဲ… ဒါနဲ့ ငါလည်း မကြည့်တော့တာ…” “ဦးအောင် သားကို သပ်သပ် သိမ်းခိုင်းထားတာ… သီတာ့ ကိုရီးယား ကားတွေနဲ့ ရောမှာ စိုးလို့… သီတာလည်း သူ့ကားတွေ စိတ်မဝင်စားလို့ ကိုင်တောင် မကြည့်ဘူး… နေဦး… သီတာ သွားယူပေးမယ်…” လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ နှင့် ဖင်ကို ရမ်းကာ ထွက်သွားသော သီတာ့ကို ကြည့်ပြီး ငါတော့ မြန်မြန် အိပ်မှ ရမယ် ထင်တယ် ဟု တွေးတာ ဘီယာ ၁ ဗူး ထပ်ဖွင့်ကာ non-stop သောက်ချလိုက်သည်။ ကုန်သွားတော့မှ စားပွဲပေါ်က ဝက်ဆာတေး ၁ ကင်ကို ကောက်ဝါးလိုက်သည်။ ခေါင်းက အူလည်လည်နှင့် ဖြစ်နေသည်။
သီတာ ပြန်ထွက်လာသော လက်ထဲမှာ CD ထည့်သည့် အိတ်ကြီး တစ်အိတ် ပါလာသည်။ ဦးအောင် လက်ထဲကို ထိုးထည့်ကာ အမြည်းကုန်တော့မှ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ အခြောက်အခြမ်း သွားယူပေးမယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားလေရဲ့။ အိတ်ရဲ့ ဇစ်ကို ဖွင့်ပြီး ခွေတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ အများစုက အောကားတွေ။ နောင်ရဲလည်း ငါ့သွေးပေမို့ ငါ့လိုပဲ ဒီကိစ္စ ဝါသနာ တော်တော်ကြီးတာပဲဟု ကြံဖန် ဂုဏ်ပြုလိုက်သေးသည်။ အနည်းကျဉ်း ဖြစ်တဲ့ ကားထဲမှာမှ သီတာလည်း ကြည့်လို့ရအောင် Mr.Bean ဟာသကားပဲ ရွေးလိုက်သည်။ သီတာ ပြန်ရောက်လာတော့ ခွေ ထိုးပေးပြီး ဖွင့်ခိုင်းလိုက်သည်။
သီတာက အခြောက်အခြမ်းတွေ အပြင် ကြက်ဥကြော်လာပေးသည်။ ရေလည်း ယူလာပေးသောကြောင့် ခြောက်နေသော အာခေါင်ကို စိုစွတ်အောင် ရေ တဂွတ်ဂွတ် နှင့် သောက်ချလိုက်သည်။ Mr.Bean ကား ကြည့်တော့လည်း ရယ်ရလွန်းလို့ အမူးတောင် ပြေမလိုပင် ဖြစ်သည်။ ဒါနဲ့ သောက်လိုက်၊ ပေါက်လိုက်နှင့် Mr.Bean ကားကို ကြည့်နေလိုက်သည်။ ခရီးသွားထားတာကနေ ညောင်းညာလို့ လက်ကလည်း မိမိ ခြေသလုံးကို မိမိ ပြန်နှိပ်ပေးနေမိသည်။ ဒါကို သီတာက မြင်သွားသည်။
“ဦးအောင်… သီတာ နှိပ်ပေးမယ်လေ… အဲ့ဒါကြောင့် ပြောတာ… ညနေတုန်းက အနှိပ်ခံလိုက်ပါဆိုတာကို…” “နေပါအေ… ညည်းက မပေါ့မပါးကြီးနဲ့ကို…” “လုပ်ပြန်ပြီ… သားဖြစ်သူကလည်း ဒီမပေါ့မပါးကြီးကိုပဲ ခလုတ်တိုက်ပြီး… အဲ…” “ဘာဖြစ်လို့လဲ…” “ဟီး… ဘာမှ မဟုတ်ဘူး… သီတာက မပေါ့မပါးပေမယ့် လုပ်နိုင် ကိုင်နိုင်ပါတယ်… ဒါကို ဟိုဟာ မလုပ်နဲ့ ဒီဟာ မလုပ်နဲ့ ဆိုပြီး ပြောနေလို့…” “သြော်… ဒါတော့ သူ့ရင်သွေး ထိခိုက်မှာ စိုးလို့ပေါ့…” “ကဲပါ… သီတာ နှိပ်ပေးမယ်… ဦးအောင် ဘာသာ အေးဆေး နေပြီး ခွေကြည့်နေ…” တားလည်း မရမယ့် အတူတူ သီတာ အနှိပ်ကို ခံရတော့မည်။
ဦးအောင် ထိုင်နေသော ၂ ယောက်ထိုင် ဆိုဖာကြီးဆီသို့ သီတာက လာထိုင်သည်။ ဦးအောင်ကို လှဲအိပ်စေလိုက်ကာ သီတာရဲ့ ပေါင်ပေါ်သို့ ဦးအောင်ရဲ့ ခြေသလုံးကို တင်ခိုင်းပြီး သီတာက နှိပ်ပေးပါတော့သည်။ သီတာကတော့ နေ့လည်က တွေ့ခဲ့တဲ့ အိမ်နေရင်း အကျီပါပဲ။ ဒီတခေါက်လည်း အတွင်းခံတွေ မဝတ်လာဘူး ထင်သည်။ ဦးအောင်ကတော့ ညအိပ်လျှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်သည့် ပုဆိုးသာ ဝတ်အိပ်တတ်သည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကြပ်ကြပ်က လူပျို ဖြစ်ထဲက ဝတ်လေ့ မရှိပေ။ ဘောက်ဆာ သာ ဝတ်လေ့ရှိသည်။
ဦးအောင်ရဲ့ ခြေသလုံးတွေကို နှိပ်ပေးနေသော သီတာ့ကို မကြည့်မိအောင် ထိန်းကာ တီဗွီဘက်ကိုပဲ ခေါင်းလှည့်ပြီး ကြည့်နေသည်။ ကြာတော့လည်း ဇက်ညောင်းလာသောကြောင့် ခေါင်းအတည့်ထားကာ မြင်နေရသည့် သီတာ့ကိုပဲ ကြည့်မိနေတော့သည်။ အနှိပ်သည် အစစ် မဟုတ်သောကြောင့် သီတာ နှိပ်နေသည်မှာ ဦးအောင်အတွက် ဘာမှ ထူးခြားပြီး အညောင်း မပြေပေမယ့် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် သာယာလာသည်။ ညီတော်မောင်ကလည်း ၃၀% လောက် တောင်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှိနေကျ အရွယ်အစားထက် နည်းနည်း ဖောင်းပွလာသော်လည်း ထောင်မတ်သည့် အဆင့်တော့ မရောက်သေး။ အရက် မူးနေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
“ခိခိခိခိ…” “ဘာဖြစ်လို့လဲ… သီတာ…” “ဒီမှာ… ကြည့်လေ… ဦးအောင်ရဲ့ နဂါးကြီး နိုးနေတာကိုး…” “ညည်းက နှိပ်တော့လည်း ဖြစ်မှာပေါ့ဟ…” “ဟင်… အရင် ဒေါ်စိန်အေး နှိပ်ပေးတာပဲ… အဲ့လို ဖြစ်လို့လား…” “လူမှ မတူတာ… သူက ညည်းလို ချောချောလှလှလေးမှ မဟုတ်တာ…” “ခိခိ… ဦးအောင်ကတော့ ပြောတော့မယ်…” ဒီပုံအတိုင်းဆို ကြိုးချင်းငြိတော့မည်ကို တွေးမိပြီး စကားလမ်းကြောင်းကို အမြန်ပြောင်းလိုက်တော့မှ ပိုဆိုးသွားတော့သည်။
“နောင်ရဲရော ဖုန်းဆက်သေးလား…” “အင်း… ညနေ ဦးအောင် အိပ်နေတုန်းက ဆက်တယ်… အိပ်နေရင် မနှိုးပါနဲ့တော့ဆိုလို့…” “ညရော မဆက်ဘူးလား… ဒီကောင်တော့… ကိုယ့်မိန်းမကို ပစ်ထားတယ်…” “ခိခိ… သူ့ကို ဂေလန်း သွားခိုင်းထားတာလေ…” “ဘာရယ်…” “ဟီး… ဟုတ်တယ်… သီတာ့ကို မပေါ့မပါးကြီးနဲ့ ဆိုပြီး သူက ဟို… ဟို… မဆက်ဆံဘူးလေ… အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဟိုရောက်ရင် သွားဖြစ်အောင် သွားဆိုပြီး လွှတ်လိုက်တာ…” “သြော်… ညည်းက မပေါ့မပါးနဲ့ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ စိတ်တွေ မရှိတော့ဘူးပေါ့…”
“ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ… ဦးအောင်ရ…” စကားမှားပြီး လွန်သွားပြီဆိုသည့် ဟန်ဖြင့် သီတာသည် ဆက်မပြောတော့ပဲ ခေါင်းငုပ်ကာ ရှက်နေတော့သည်။ ခေါင်းငုပ်ပြီး ရှက်တာက အကြောင်းမဟုတ်။ သီတာက ပေါင်ကို နှိပ်နေရင်းနဲ့မှ ပေါင်ရင်းကို ရောက်ကာ ညီတော်မောင်ကိုလည်း မထိတထိ အနေအထား ဖြစ်သွားသည်။ ဒီလို အခြေအနေ ဖြစ်လာတော့မှ ဦးအောင်လည်း မထူးဇာတ် ခင်းရတော့မည်။ ညီတော်မောင်ကို မထိတထိ ဖြစ်နေသော သီတာ့လက်ကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး ညီတော်မောင်ဆီ အရောက်ပို့လိုက်သည်။ ၂ ယောက်သား အကြည့်ချင်း ဆုံသွားသည်။ ဘာစကားမှ မပြောတော့။
ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ရမည် ဆိုတာကို အလိုအလျောက် သိသွားတော့သည်။ ပုဆိုးကို ဖြေလျှော့ပေးပြီး တောင်မတ်နေသော ညီတော်မောင်ကို သီတာက ကွင်းတိုက်ပေးတော့သည်။ ပြီးတော့ ဦးအောင်ကို မတ်တတ်ရပ်ခိုင်းပြီး သီတာရဲ့ ပုလွေအစွမ်း ပြတော့သည်။ အရက်တန်ခိုးကြောင့် ၂ ဆ တိုးပြီး သွေးကြောတွေ ထောင်ထွက်နေသော ညီတော်မောင်ကလည်း တော်ရုံနှင့် မပြီးပေ။ ဒီတခါတော့ ဦးအောင် အလှည့်ပေါ့။ သီတာ့ကို ဆိုဖာခုံမှာ လှဲခိုင်းလိုက်ပြီး ဘာဂျာအစွမ်းပြတော့သည်။ နောင်ရဲက မထိရက် မကိုင်ရက်သော ရင်သား ၂ မွှာ ကိုရော၊ အမွှေးနုနုတွေနှင့် ဖောင်းပွနေသော ညီမလေးကိုရော ကိုင်သည်၊ စုပ်သည်၊ ပြီးတော့ ထင်ရာဆိုင်းပါတော့သည်။ ၂ ယောက်ထဲ ရှိသော အိမ်လေးသည် အသံတွေ ဆူညံနေလို့ပေါ့။
“အဲ့ဒါကြောင့် သီတာ့ကို ပြောတာပေါ့… ဦးအောင် ဒီမှာ သီတာတို့နဲ့ အတူတူ မနေချင်တဲ့ အကြောင်းရင်း…” “အဲ့ဒါကြောင့် သီတာကလည်း ဦးအောင်ကို ပြောတာပေါ့… သီတာတို့နဲ့ လာနေစေချင်တဲ့ အကြောင်းရင်း…” “သြော်… သီတာရယ်…” (နောင်ရဲရေ… မင်း ငါ့မိန်းမ နို့ကို စို့ထားတာ… ငါလည်း မင်းမိန်းမ နို့ကို စို့တာ မင်း အပြစ်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်…)
၂ ရက်လောက် အချိန်ရသဖြင့် ဦးအောင်နှင့် သီတာမှာ ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံ ပမာ။ နောင်ရဲ ပြန်လာတော့ အရာ အားလုံးက ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားသည်။ ထူးခြားသည်မှာက ဦးအောင်သည် သားဖြစ်သူ ချွေးမဖြစ်သူတို့ဆီ အလည်လာတာ များလာကာ၊ နောက်တော့ ဟိုဘက်အိမ်ကို ရောင်းလိုက်ပြီး အတူတူ နေကြတော့လေသည်။ ပီး
အ ပြို ကွီး မ မွ ခကျ ၏ ဈာနျ လြှော ခနျး